Wararka - Dharka Pinyang wuxuu abuuraa aqoon isweydaarsi wax soo saar jilicsan oo isku dhafan tolidda, midabaynta iyo tolidda
Dharka Pinyang wuxuu abuuraa aqoon-isweydaarsi wax-soo-saar dabacsan oo isku-dhaf ah tolidda, midabaynta iyo tolidda
Amarada kaliya labo ama seddex dhar waa la aqbali karaa
Soo dhexgalka Alibaba ee “warshadda wiyisha”, isbadalka caqliga badan ee warshadaha soo saarista dharka ayaa noqday mid si weyn looga hadal hayo warshadaha markale. Xaqiiqdii, tan iyo markii moodada dharka caalamku u egtahay inay tahay "dhaqso dhakhso leh", waxay noqotay xirfad gaar ah warshadaha soosaarka dharka si loo hubiyo inay ku guuleysan karaan tartanka adag si ay ula kulmaan baahida wax soo saar ee noocyo badan, dufcad yar iyo jawaab deg deg ah.
Maaddaama ay tahay ganacsi duug ah oo taariikhdiisu tahay 12 sano, qabashada fursad kasta oo waqtiyadu siiso waa hub sixir ah oo lagu waarayo barwaaqo. Laga soo bilaabo 2019, mashruuca waxaa loo beddelay, laga bilaabo tolidda, daabacaadda iyo dheeh si loogu tolo loona tolo teknolojiyadda macluumaadka Nooca silsiladda sahayda ee wax soo saarka agile iyo soosaarka dabacsan ayaa lagu aasaasay dhammaan xiriidhada silsiladda warshadaha oo dhan. Maanta, waqtiga bixinta ee amarrada miisaanka warshadaha ee Pinyang waa laga soo gudbay 40 maalmood oo caadi ah illaa 15 maalmood, iyo amarrada degdegga ah ee soo celinta (amarrada ka yar 2000 xabbadood) waxaa loo gudbiyay illaa 7 maalmood. Waad ku mahadsan tahay jawaabtan degdegga ah.
Amarka yar, waa ka sii xun yahay. Tani waa wax la isku raacsan yahay warshadaha dharka. Waqtigaan la joogo, qaar ka mid ah amarrada gudaha xitaa waa 2 ama 3 gogo ', waxaana jira kaliya 128 gogo' oo ah hal SKU oo ah nooc isboorti oo dibedda ah, taas oo gabi ahaanba looga baahan yahay dufcad yar, tiro badan iyo waqtiga dhalmada degdegga ah. Shirkaduhu inay raacaan waxtarka, falanqaynta ugu dambeysa waa inay hagaajiyaan tartanka, kuwa kale ma aqbali karaan amarrada aad qaadan karto, tani waa faa'iidada. Tani waxay sidoo kale ku habboon tahay horumarka muddada-dheer ee shirkadaha. “